DHAGEYSO: Madaxweyne Shariif xasan oo Kursigiisii Xildhibaanimo Wiilkiisa u dhiibtay – idalenews.com
DHAGEYSO: Madaxweyne Shariif xasan oo Kursigiisii Xildhibaanimo Wiilkiisa u dhiibtay
Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee ka kooban Sadaxda Gobol Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa Xubinimadii Baarlamaanka uu kamidka ahaa dhawaan iska casilay, waxa uuna kursigiisa ku wareejiyay Wiil uu dhalay.
Kulankii ay maanta Xildhibaanada Baarlamaanka ku yeesheen Xarunta Golaha Shacabka ayaa lagu dhaariyay C/qaadir Shariif Xasan Sheekh Aadan, oo maanta si rasmi ah uga mid noqday Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya.
Xildhibaankan uu dhalay Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa marii la dhaariyay waxaasi diiran u soo dhaweeyay una sacaba tumay Xildhibaano katirsan Baarlamaanka .
Xildhibaano horey uga tirsanaa Baarlamaanka Soomaaliya ayaa booskooda waxa ay u baneeyeen wiilal ay dhaleen iyo dad kale oo ehel la ah, kadib markii ay iska casileen kasii mid ahaanshaha Xubinimada Baarlamaanka.
Maamulka Puntland oo Wasiirka Duurjoogta u dirtay magaalada Baydhabo, ka qeybgalka calaama saarka Shariifka
Taliyaha booliska Kenya oo xilka iska casilay iyo Wasiir Xilka laga qaaday